Ilanga, igumbi elizolileyo. Hamba uye elwandle. Isilwanyana esinobubele.
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguErin And Joe
Kufakwe imibala ethambileyo engathathi hlangothi, ifanitshala ye-beachy-chic, kunye neebhedi ezimfumamfuma. Le suite eqaqambileyo nenomoya inika umoya ozolileyo, ozolileyo. Ngena ngaphandle kweli khaya lisanda kuhlaziywa ukuze utye i-alfresco kwipatio enokukhanya kweentambo kunye nokuhombisa umhlaba. Yonwabela ikofu okanye iti ekuseni ngaphambi kokuba ubambe iibhodi ze-boogie kunye nezitulo kwi-wardrobe yethu egcweleyo elwandle kwaye uye elunxwemeni. Umgama nje omfutshane wemizuzu emibini ukuhamba ukuya kowona kufikelela okufutshane. Zonwabele izinto eziluncedo ezikufutshane ngaphandle kokuhlawula indawo yokupaka. Inja inobubele.
Igumbi lethu lokulala elinye, igumbi lokuhlambela elinye labucala leendwendwe libekwe kumgangatho wokuqala wekhaya lethu. Uya kuba nendawo yokungena yangasese kwaye akukho zithuba ekwabelwana ngazo. Sinikezela ngefriji encinci, i-microwave kunye nembiza yekofu enezixhobo zokuqalisa. Ukongeza, uya kufumana izinto zasekhitshini ezisisiseko ezifana nezitya, izinto zesilivere, iiglasi, iikomityi zekofu, iiglasi zewayini kunye nokuvula ukuze kube lula kuwe. Sisanda kuhlaziya le renti yangaphambili kunye neebhedi ezintsha kunye neelinen. Sizise i-beach flair eludongeni lokuhombisa ngemibala epholileyo kunye nemiboniso yolwandle. Sibonelela nge-intshi engama-42 ye-smart TV enekhono lokusasaza ukusuka kwiiapps zakho zokusasaza ozithandayo.
Sinekhabhathi yaselwandle egcweleyo ebekwe ngaphakathi kwendawo yokungena yabucala kwi-suite yethu. Unokuziva ukhululekile ukusebenzisa naziphi na izinto ozifumana kwikhabhathi. Sikwanayo nepatio epheleleyo ene-grill kunye nefenitshala yangaphandle eya kuthi ifikeleleke ngexesha lokuhlala kwakho. Ishawari yangaphandle ikufuphi nesango labucala lendlu yeendwendwe zethu.
42" HDTV ene-I-Amazon Prime Video, I-Disney+, I-Hulu, I-Netflix
Isitalato esizolileyo sikwiibhloko ezimbini ezimfutshane ukusuka elunxwemeni. Ukuhamba ngokulula ukuya kwi-Oceanfront Tiki Bar kunye neGrill. Ukongeza, zininzi izinto eziluncedo ezibekwe kumgama wokuhamba kubandakanya indawo yokutyela isidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesidlo sangokuhlwa kunye ne-ice cream parlors. Siyathemba ukuba uyakukonwabela ukufumana ezi zinto ziluncedo kumgama wokuhamba. Sikwakufuphi nebhodi edumileyo yaseCarolina Beach apho unokonwabela ukumamela umculo, ukukhwela kunye nokuzonwabisa, kunye nezinye iindawo zokutyela ezininzi. Indawo yaseFort Fisher kunye nesikhephe esiya eSouthport zikwayindlela nje ekhawulezayo yokuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Erin And Joe
Sifumaneka ngomnxeba, umbhalo kunye/okanye nge-imeyile nangaliphi na ixesha ukuhlala kwakho.